Home » သတင်း » Canon ၏ Burbank: Facility ခရီးစဉ်
ထုတ်လွှင့် BeatSun ကဇူလိုင်လ 16, 2017 9: 25pm URL:
ထုတ်လွှင့်ဘိ၏ရန်းဖွင့်ပွဲဖိတ်ကြားခဲ့သည် ကို Canon Burbank ။ သူတို့ရဲ့ Professional ကနည်းပညာ & စင်တာတွင်တည်ရှိသည် လှပသောမြို့လယ် Burbank, CA. ဤအရပျလုံးကိုနောက်ဆုံးပေါ်နည်းပညာရှိပါတယ်နှင့်အဘယ်သို့ဆိုင်စိတ်လှုပ်ရှားဖွယ်င်သောကွောငျ့ဖွစျသညျ ကို Canon တစ်ခုလုံးကိုမိမိတို့တံခါးများဖွင့်လှစ်လိုက်ပါတယ် ဟောလိဝုဒ် အသိုင်းအဝိုင်း!
ထုတ်လွှင့်အင်ဂျင်နီယာ ထုတ်လွှင့်အင်ဂျင်နီယာ ဗီဒီယိုကိုအင်ဂျင်နီယာချုပ်	2017-07-16
ယခင်: Canon ၏ Burbank Reality ဖြစ်လာ
ဟေ့လုပ်ပြီး Buddy !, ငါသည်သင်တို့အဘို့ဤအချက်အလက်တွေ့ရှိခဲ့: "ကို Canon Burbank: Facility Tour" ။ http://www.broadcastbeat.com/canon-burbank-facility-tour/: ဒီမှာက်ဘ်ဆိုက်လင့်ခ်ဖြစ်ပါတယ်။ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။